South Korea Archives - 24 News Press
कोरियाबाट कुँवरले एसिया प्यासिफिक सह–संयोजकमै उम्मेदवारी दिने
काठमाडौँ(जस)– गैरआवासीय नेपाली संघको आगामी कार्यकालका लागि एसिया प्यासिफिक सहसंयोजक विनोद कुँवरले सोही पदमा उम...
पेशाले इन्जिनियर रहेका राईले एसिया प्यासिफिक उप संयोजकमा उम्मेदवारी घोषणा
लण्डन ,गैह्र आवासिय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको आसन्न ९ औं महाधिबेशनका लागि लोचन राईले एसिया प्यास...
एनआरएनए कोरियामा कोषाध्यक्ष पदमा जिताउनुस योग्य र सक्षम शावित गराउनेछु: कुसाङ शेर्पा
कोरिया : गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) कोरियाको कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको कुसाङ शेर्पाले...
कोरियाबाट आइसिसी महिला संयोजकमा गुरुङकाे बलियाे उम्मेदवारी
काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ एसिया प्याशिफिक महिला फोरम संयोजक जुनु गुरुङले आइसिसी महिला फोरम संयोजकमा उम्...
एनआरएन कोरियाको अध्यक्षमा बिपिन गुरुङ्ग निश्चित
गैरआवासीय नेपाली संघ कोरियाको अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिएका बिपिन गुरुलाई जनसम्पर्क समिती कोरियाले सहयोग गर्न...
NRNA दक्षिण कोरियाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिपिन गुरुङकाे ६ बुँदे घोषणापत्र सहित अध्यक्षमा उम्मेदवारी
२०१९ – २०२१ को लागि गैरआवासीय नेपाली संघ दक्षिण कोरियाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिपिन गुरुङले आगामी कार्यकाल अ...
पत्रकार महासंघ कोरियाले गर्यो निवर्तमान अध्यक्ष कार्कीलाई भब्य सम्मान तथा बिदाई
सौल – नेपाल पत्रकार महासंघ दक्षिण कोरियाको निबर्तमान अध्यक्ष तथा बर्तमान केन्द्रीय पार्सद खेम कार्कीलाई...
Posted By: 24 News Presson: September 29, 2019
काठमाडौँ(जस)– गैरआवासीय नेपाली संघको आगामी कार्यकालका लागि एसिया प्यासिफिक सहसंयोजक विनोद कुँवरले सोही पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा गर्न बाँकी केही अधुरा काम पुरा गर्नका लागि सहसंयोजक पदमा नै उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेका हुन् ।
एनआरएन तथा व्यक्तिगतरुपमा नेपालमा लगानी ल्याइरहेका कुँवरले आगामी कार्यकालका लागि सोही पदमा उम्मेदवारी दिएर अधुरा काम पुरा गर्ने बताएका छन् । उनले भने–‘केही अधुरा काम पुरा गर्न सहसंयोजक पदमा नै उम्मेदवारी दिने निर्णयमा पुगेको छु ।’
म्याग्दीका कुँवर लामो समयदेखि दक्षिण कोरियामा व्यवसाय गर्दै सामाजिक काममा सक्रिय छन् । दुई पटक एनआरएनए दक्षिण कोरियाको अध्यक्ष भइसकेका कुँवर आइसीसी सदस्य हुँदै एसिया प्यासिफिक सहसंयोजक भएर काम गरिरहेका छन् । एनआरएन बृतमा रुचाइएका कुँवरले स्वदेशमा लगानी भित्र्याउन विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरु ल्याइरहेका छन् ।
विगत १४ बर्षदेखि एनआरएनएमा आवद्ध रहेका कुँवरले नेपालमा पहिलो पटक ललितपुरको सन्तानेश्वरमा मोनोरेल संचालनमा ल्याउँदैछन् । दक्षिण कोरियाको लोतेरिया गु्रपलाई नेपाल ल्याउन सम्झौता गरिसकेका कुँवरले नेपालमा लगानी ल्याउनका लागि धेरै काम गरिरहेका छन् ।
स्वदेशमा नै हाइड्रोपावर पनि बनाइरहेका कुँवर प्रचारप्रसार भन्दा काममा विश्वास राख्दछन् । विदेशमा कमाएको सानो–सानो पूँजीलाई सामूहिकरुपमा ल्याउनका लागि उनले विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि ल्याइरहेका छन् । भन्छन्–‘आफ्नो मात्र होइन स्वदेशमा धेरैभन्दा धेरै लगानी आउनुपर्छ भनेर सबै नेपालीलाई समेट्दै छु ।’ एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुले भोग्दै आएका समस्या समाधान आफ्नो मुख्य एजेण्डा हुने समेत उनले बताए ।
करिव १९ बर्षको उमेरमा दक्षिण कोरिया छिरेका कुँवर अहिले कोरियामा सफल व्यवसायी बनेका छन् । नेपाल र कोरियाबीच टे«डिङ व्यवसायको अलावा रेष्टुरेण्ट व्यवसाय गरिरहेका कुँवर रेमिट्यान्सको व्यवसायमा पनि छन् । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेका नेपालीले नेपालको सबैभन्दा धेरै मायाँ गर्ने बताउने कुँवर स्वदेशमा लगानी ल्याउने मध्येका एनआरएन हुन् ।
Posted By: 24 News Presson: September 28, 2019
लण्डन ,गैह्र आवासिय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको आसन्न ९ औं महाधिबेशनका लागि लोचन राईले एसिया प्यासिफिक उप संयोजकमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।आफूले उम्मेद्बारी दिनुका मुख्य कारणहरु प्रष्ट्याउदै उनले एसिया प्यासिफिकमा बसेका सबै नेपालीहरुको साझा समस्याहरु पहिचान गरी त्यसको निराकरणमा प्रयास गर्ने , सबै नेपाली समुदाय संघ संस्थालाई एकबद्द गराई उनिहरुको सामाजिक, आर्थिक तथा नेपाली समाजको बिकासमा उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्ने जस्ता जस्ता एजेन्डा आफूले अगाडी सारेको बताएका छन् ।
लामो समय कोरियामा बस्दै आएका राई बर्तमान एन आर एन ए आइसिसि सदस्य समेत हुन । राइ लामो समय देखि निरन्तर समाजसेवामा सक्रिय रहदै आएका छन् । कोरियामा स्थापना भएको नेपालीहरुको सबै भन्दा पुरानो सामाजिक संस्था नेपाली सम्पर्क समितिका पुर्ब अध्यक्ष, एन आर एन ए कोरियाका पुर्ब उपाध्यक्ष हुदै हाल आइसिसि सदस्य हुन। यस बाहेक सामाजिक अभियन्ताको रुपमा समेत परिचित छन् राई ।
बुद्द प्रतिमा स्थापना अभियान, नेपाल हाउस ब्यवस्थापन अभियान लगायत अन्य सामाजिक अभियानमा समेत सक्रिय रुपमा सहभागिता रहेका थिए । पेशाले इन्जिनियर रहेका राइ एन आर एन ए संस्था र अभियान मार्फत समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नका लागि एसिया प्यासिफिक उप संयोजकमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताए । बिश्वभरबाट नेपालमा भेला भइ ९ औ महाधिबेशन मार्फत आफुलाई एसिया प्यासिफिक उपसंयोजकमा अमुल्य भोट दिइ बिजयी बनाइ दिनु हुन एसिया प्यासिफिकका एन आर एन दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरुलाइ हार्दिक अपिल समेत गरेका छन्।
Posted By: 24 News Presson: September 11, 2019
कोरिया : गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) कोरियाको कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको कुसाङ शेर्पाले ‘आर्थिक अनुसाशन र पारदर्शिता’ को लागि आफनो उम्मेदवारी भएको बताउनुभएको छ । शेर्पाले आफनो उम्मेदवारी कोरिया एनआरएनभित्र आर्थिक पारदर्शीता गर्दै स्रोतको परिचालन गर्नको लागि भएको बताउनुभयो ।
साथै शेर्पाले भिजीट नेपाल २०२० सफल पार्न कोरियाबाट सशक्त भूमिका खेल्ने, सरोकारवाला संस्थाहरु र नेपाली दूतावाससँग समन्वय गरि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नेपालमा एफडीआई भित्र्याउन एनआरएनए कोरिया मार्फत भूमिका खेल्ने, नेपाली मजदुर साथीहरुको समस्या समाधान पहल गर्ने, कोरिया राजदूतावास मिलेर कोरियाको नियम कानुन आदि विषयमा जानकारीमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने जस्ता आफना एजेन्डा अगाडि सार्नुभएको छ ।
विगत सात वर्षदेखि कोरियामा बस्दै आउनुभएको शेर्पा एक इमानदार छवी बनाउन सफल हुनुहुन्छ । आफूलाई काम गर्न सक्ने, योग्य र सक्षम उम्मेदवारको रुपमा उम्याउँदै शेर्पाले एनआरएनए कोरियालाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउन र पारदर्शी बनाउनको लागि आफनो उम्मेदवारी भएको बताउनुभएको छ ।
शेर्पा कोरियाको राजधानी सौलमा रहेको अन्तरास्ट्रिय निर्माण कम्पनीको बैदेशिक बिभागमा रहि नेपाल, Bangladesh, Iraq, Mozambique, Thailand, Laos, Myanmar, Bolivia, Nicaragua, Equador र India मा एसिया डेवलपमेन्ट बैक, कोरियन बैंक र विश्व बैकले फन्ड गरेको आयोजनामा काम गर्दै आउनुभएको छ । शेर्पाले काठमाडौं विश्वविद्यालय र नर्वेजीयन विश्वविद्यालयमा ईलेक्टीकल ईन्जिनियरमा मास्टर डिग्री गर्नुभएको छ ।
Posted By: 24 News Presson: September 05, 2019
काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ एसिया प्याशिफिक महिला फोरम संयोजक जुनु गुरुङले आइसिसी महिला फोरम संयोजकमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छन ।
आगामी अक्टोवर १५ देखि १७ सम्म काठमाडौंमा हुने एनआरएनएनएको नवौं विश्व सम्मेलनमा जुनु गुरुङले आइसिसी महिला फोरम संयोजकमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी हुन । हाल एसिया प्याशिफिक महिला फोरम संयोजक छिन। कोरियामा समाज सेबीको रुपामा आफुलाई चिनाउन सफल उनि सबैका समस्याहरु आफ्नै सम्झेर समधानको बाटो तफैलाग्नाले सबैको पृय भएकी छन । समाज सेवामा सकृय रहि काम गरे बापात उन्लाई दक्षिण कोरियान सरकारले मानार्थ सिटिजन सिपको उच्च सम्मानले पुरस्कृत भएकी थिईन यसबाट पुरस्कृत हुने पहिलो नेपाली महिला पनि हुन, भने महिलाहरूको साँझ संस्थाको को सस्थापक अध्यक्ष मा पनि सफल कार्यकाल निभाई सकेकि छन।
जुनुले एनआरएनए एनसिसी गठन भएका सबै देशमा महिला फोरम गठन गरीसकेको छन,भने एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका कार्यक्रम हङकङ र म्यानमारमा भब्यताकासाथ सम्पन्न गराएकि थिईन ।महिलाहरुका आवाजहरुलाई सशक्त रुपमा उठाउनका लागि,आर्थिक तथा ब्याबसायिक बलियो बनाउनको लागी ,महिलाहरूको स्वास्थ्य शिक्षामा अझै सुधार गर्न, मजदुर मैत्री बनाउन, एशिया प्यासिफिक क्षेत्र र मिडल ईस्टमा मजदुर तथा महिलाहरूको दर्दनाक दुःखहरू भएकोले ति समस्या हरूलाई समाधान गर्नलाई बिशेष पहल गर्ने बताईन ।
एनआरएनमा सवै वर्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिँदै जुनुले विश्वभरिका अग्रज महिला दिदीबहिनी तथा अग्रज एनआरएन अभियन्ताको सल्लाह र सुझाव अनुसार आइसिसी महिला फोरममा जाने निर्णय गरेको समेत बताएकी छन । एसियामा धेरै देशमा महिला फोरम गठनमा सफल भएको बताउँदै महिला फोरम अभियानलाई सफल बनाएसँगै अब विश्वभरी महिलाहरुको सञ्जाललाई विस्तार गर्नु आफनो मुख्य एजेन्डा हुने उल्लेख गरेकी छन।
एनआरएएन भनेको सबैको साझा संस्था भएको बताउँदै संस्थालाई गतिशिल र सबैको अपनत्व हुने गरि अगाडि बढाउन सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व समेत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै महिला दिदीबहिनीहरुको सबैको अवस्था एकै नभएको भन्दै आफू मध्य पूर्वमा रहनु भएका महिलाहरुको आवाजलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने संकल्प गरेकी छन ।
Posted By: 24 News Presson: August 24, 2019
गैरआवासीय नेपाली संघ कोरियाको अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिएका बिपिन गुरुलाई जनसम्पर्क समिती कोरियाले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका गुरुङ्गलाई जनसम्पर्क समिती कोरियाको समर्थनले ठुलो टेवा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
बिगतमा जनसम्पर्क समिती कोरियाको समर्थन पाएका उम्मेदवारहरुले बिजय हासिल गर्ने गरेकोले गुरुङ्गको पल्ला भारी हुने अनुमान गरिएको छ ।
Posted By: 24 News Presson: July 20, 2019
२०१९ – २०२१ को लागि गैरआवासीय नेपाली संघ दक्षिण कोरियाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिपिन गुरुङले आगामी कार्यकाल अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छ्न ।
संघको सेप्टेम्वर २१ र २२ मा हुने निर्वाचनमा अध्यक्षमा औपाचारिक रुपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका गुरुङ एनआरएन कोरियाका सक्रिय सामाजिक अभियान्ता , कुशल भलिबल तथा ब्याडमिन्टन खेलाडि संगै सफल ब्यवसायी भनेर चिनिन्छन । उनले आफ्नो उम्मेदवारी औपचारिक ६ बुंदे घोषणापत्र सहित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन ।
एनआरएन कोरियालाई सशक्त, मजबुद बनाउन र कोरियाबासी नेपालीहरु बिच सस्था प्रती अपनत्व सृजना गर्न आफु संस्थाको नेतृत्वमा आउन लागेको गुरुङले बताएका छन् । वर्तमान कार्यसमिति २०१७-२०१९ मा बरिस्ठ उपाध्यक्ष रहेका उनी एनआरएन द्वारा संचालित नेपाल हाउस ब्यवस्थापन संयोजक , खेलकुद संयोजक भएर कुशल जिम्मेवारी पनि सम्हाली सकेका उनले आफ्नो नेतृत्वमा एनआरएन गाला च्यारिटी कार्यक्रम समेत सम्पन्न गरेका गुरुङ बिगत लामो समय देखि नै एनआरएन अभियानमा निरन्तर रुपमा कार्य गर्दै आएका छन । कोरिया बासि सम्पूर्णलाई आदर भाव प्रकट गर्दै ६ बुँदे प्रतिबद्धता यस्ता छन ।
१) NRNA दक्षिण कोरियालाई कानुनी रुपमा दर्ता गराउने स् गैरआवासीय नेपाली सॅघ दक्षिण कोरियालाई सर्वप्रथम कानुनी रुपमा दर्ता गराउने पहल रहनेछ।धेरै प्रकृया अगाडि बढेको पनि जानकारि गराउँदछु। संस्थालाई कानुनी रुपमा कोरिया सरकारमा दर्ता गरेर हाम्रो टिमले विगतमा भन्दा धेरै र भिन्न प्रकारका सामाजिक तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गरिनेछ।
२) कानुनी,आर्थिक र मनोवैज्ञानिक सहयोग गर्नेस् कोरियामा रहेका विभिन्न संघसंस्था,एनआरएन का क्षेत्रिय पदाधिकारी,बुद्धिजिवी,सम्पूर्ण श्रमजिवी,विधार्थी,व्यवसायी तथा सम्पुर्ण सञ्चारकर्मीहरु संग मिलेर याहॉ रहेका हामी नेपालीहरुको हकहित,कानुनी समस्या,तनाव तथा विरामीहरुको उपचारार्थ,आर्थिक तथा कानुनी सहयोग र सम्सया सभाधानमा लाग्ने छौॅ। दुतावास र कोरिया सरकारसॅग मिलेर हामी सबै एकजुट भएमा धेरै राम्रा काम गर्न सकिन्छ,यसमा मेरो विशेष जोड रहनेछ।कोरियामा नेपालीहरुको संख्या वृद्धि संगै प्रत्येक महिना जसो विभिन्न घटानाहरु गटिरहेका छन् र यसको समाधान गर्नको लागि उपयोगीमूलक कार्यक्रमहरु र परामर्श सेवा प्रदान गरिनेछ।
३) अक्ष्यकोष स्थापना दुई बर्षीय कार्यकालमा जतिसक्दो नेपालमा रहेका पिछिडिएका पीडित र असक्त, वृद्ध,गरिब तथा जेहेन्दार विधार्थीहरुलाई सहयोगका लागी आर्थिक संकलन गरी आवाश्यक सहयोग गर्ने र यसका लागि ५० लाख देखि १ करोड सम्मको अक्ष्यकोष निमार्ण गरिनेछ। साथै यस बाट आएको ब्याजले नेपालमा रहेको दुस्खी पिडितको सहयोग गरिनेछ।
४) एनआरएनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने NRNA कोरियाले एनआरएन आईसिसि सॅगको सहकार्यमा पहिलो पटक एतिहासिक एनआरएनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिनेछ।यसका लागी कोरियामा रहेका सॅघसॅस्थाका प्रतिनिधि ज्युहरु संग सहयोग सल्लाह लिएर काम गरिनेछ।
५)लगानीको वातावरण बनाउने स् कोरियामा कमाएको शिप र पुँजीबाट आफ्नै देशको समृद्धको लागि एउटा ठूलो र सेवामूलक तथा आयमूलक कोरियन परियोजना निर्माण गरि नेपालीहरुको जीवनस्तर माथि उकास्न पहल गर्नेछौ।
यसका साथै सॅसार भरि छरिएर बसेका एनआरएन का अति सफल तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुसॅग मिलेर नेपालको कृषि,पर्यटन,होटल व्यवसाय,हाइड्रोपावर जस्ता आयमूलक प्रोजेक्टमा कोरियाबाट पनि लगानी गर्नको लागि सेमिनारहरुको आयोजना गरि आफ्नो लगानी निश्चित रुपमा नफस्ने ग्यारेन्टी हुने गरी निती नियमहरु बनाउनेछौ।
६) संस्थाको गतिविधि पारदर्शी बनाउने NRNA कोरियाको गतिविधिहरु,हिसाब किताबलाई पारदर्शी बनाईनेछ।साथै संस्थाको वेवसाइट तथा फेसबुक पेजदृरा अपडेट गराईनेछ । संस्थालाई कसरी स्वच्छ र मर्यादित बनाउने भन्ने बिषयहरुमा गम्भीर भएर कसैले औंला उठाउने ठाउॅ राखिने छैन।
अन्तयमा,यस संस्थामा रहेर विगतमा गरेका आफ्नो केहि राम्रो कामहरुलाई थप निरन्तरता दिदै यस सॅस्थाको गरिमालाई उच्च कायम गर्न अझ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जायर गर्दछु र यसका लागि एनआरएनए का पुर्बअध्यक्षज्युहरु,आईसिसि प्रतिनिधिहरु,डिआरसी,एसिया प्यासिफिक प्रतिनिधि एवं वर्तमानको सम्पूर्ण कार्यसमिती र कोरियाका सम्पूर्ण नेपाली सॅघसॅस्थाका प्रतिनिधिज्युहरु सॅग सहयोग हुने विश्वास गर्दै याहॉहरुको आवश्यक सल्लाह,सुझावका साथै सहयोग र साथको अपेक्षा राख्दछु । धन्यवाद ।।
विपिन कुमार गुरूङ
एनआरएन दक्षिण कोरिया
(२०१९ – २०२१)
Posted By: 24 News Presson: February 27, 2019
सौल – नेपाल पत्रकार महासंघ दक्षिण कोरियाको निबर्तमान अध्यक्ष तथा बर्तमान केन्द्रीय पार्सद खेम कार्कीलाई नेपाल पत्रकार महासंघ दक्षिण कोरियाले भब्य सम्मान तथा बिदाई गरेको छ । दोङ्देमुन स्थित शुभेच्छा रेस्टुरेन्टको हलमा गरिएको बिदाई कार्यक्रमका सभापतित्व महासंघका अध्यक्ष रन्जन कुवँरले गरेका थिए भने सन्चालन महासचिब मीन बिकले गरेका थिए।
एनआरएन एसिया प्यसिफिक महिला सम्योजक जुनु गुरुङ , एन सि सि का बरिस्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रसाद श्रेष्ठ ,प्रदेश नम्बर ३का अध्यक्ष किशोर ब्लोन नियोन ,धादिङ समाजका अध्यक्ष सन्तोष अधिकारी ,दोलखा समाजका अध्यक्ष सरोज के सि ,काभ्रे समाजका सानु लामा, चितवन सम्पर्क समाजका प्रतिनिधि, थारु कल्याणकारी समाजका शिव संकर महतो, नुवाकोट समाजका सचीव शुन्दर अधिकारी लगायत थुप्रै सामाजिक अभियान्ता युवाहरु ,समाजसेवीहरु ,राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरु ,बुद्दिजिवीहरु तथा पत्रकार मित्रहरुको बाक्लो उपस्थित रहेको थियो ।
कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै एन आर एन महिला सम्योजक जुनु गुरुङले “पत्रकार महासंघ कोरियाले कोरियाको नेपाली समाजमा सधै अग्रणी क्षेत्रमा रहि खेलेको भुमिका सम्मानजनक रहेको र कोरिया काम र बाकी समय तथ्य समाचार प्रसारण गरि आम कोरियाबासी नेपालीमा समाचार पुर्याउने पत्रकारज्युहरुलाइ सम्पुर्ण निकायले सम्मान हौसला दिनुपर्ने बताइन् र एनआरएन केन्द्रले सदैव विभिन्न क्रियाकलाप गर्दा पत्रकार महासंघ केन्द्र सङ सल्लाह लिने गरेको कुरा पनि अवगत गराएका थिइन्” ।
त्यसैगरी बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रसाद श्रेष्ठले “कोरियामा बिदाई कार्यक्रम भब्य सभ्य बनाउनु भएको र अबका दिनहरुमा बिदाई कार्यक्रमहरुलाई पनि एकरुपता गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनु भयो त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ दक्षिण कोरिया शाखाका अध्यक्ष रन्जन कुवँरले “एकैसाथ काम गरेर धेरै कुराहरु सिकेको र अब आउने दिनहरुमा पनि उत्तिकै साथ सहयोग प्राप्त गर्ने कुरामा आफू बिस्वस्त रहनुका साथै नेपाल बसाईमा समृद्ध देश बिकासमा ब्यवसायिक पत्रकारिता जोड दिई आगामी दिनमा अझै शसक्त रुपमा आफ्नो पेशागत मर्यादालाई कायम राखी पत्रकारिता जगतमा उपलब्धिमुलक काम गर्नु हुन सुझाब दिएका थिए भने नेपाल बसाई भएता पनि कोरिया शाखालाई सल्लाह सुझाबको सदैब अपेक्षा रहेको व्यक्त गर्दै खादा ओढाएर सम्मान पत्र निवर्तमान अध्यक्ष खेम काक्रीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । भने उपस्थित सबैले पालैपालो खादा ओढाएर सम्मान गरेका थिए ।
सम्मान ग्रहण गरिसकेपछी अन्त्यमा बोल्दै निवर्तमान अध्यक्षले लगायत उपस्तिथ सम्पुर्ण लाई धन्यवाद दिदैं भोतिक रुपमा टाढा हुने भएता पनि अहिलेको डिजिटल दुनियाँमा हामी साथमै रहने र साथ सहयोग सदैव तपाईहरुकै वरपर रहने कुरा ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कोरियामा बस्ने नेपालीको समस्या बढ्दै गएको भन्दै एनआरएन अध्यक्ष गुरुङद्धारा राजदुतावासको ध्यानर्कषणा
Posted By: 24 News Presson: February 13, 2019
सउल, दक्षिण कोरिया – कोरियामा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको समस्या बढ्दै गएको भन्दै एनआरएन कोरिया अध्यक्ष लक्ष्मी गुरुङले सबैको ध्यानर्कषण गर्नुभएको छ । कोरियामा बस्ने नेपालीको समस्यालाई समयमै ठोस निकास निकाल्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष गुरुङले कोरियास्थित नेपाली राजदुतावासको ध्यानर्कषण गराउनुभएको हो । यहाँ बस्ने नेपालीको समस्या समाधानको लागि आफू जुनसुकै बेला पनि सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै सबैको सहयोगले मात्र समस्या समाधान गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
अवैधानिक रुपमा कोरियामा नेपालीहरु रहरले होइन, बाध्यताले बस्दै आएकोले उनीहरुको नेपाल फिर्तीको सवालमा नेपाल सरकार समेतको पहल हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । कोरियाको नयाँ वर्ष सलनालको अवसरमा उदयपुर सेवा समाजद्वारा आयोजित उदयपुर म्युजिक कन्सर्टमा को कार्यत्रममा सो धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले दूतावासप्रति पछिल्लो समय गुनासो बढ्दै गएकोमा समेत चिन्ता ब्यक्त गर्नुभयो । निकै दुःख कष्ट गरि बसिरहेका नेपालीहरुलाई नेपाली नै होइनन् भनेर ब्यवहार गर्न नहुने र समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । अवैध रुपमा कोरियामा बसिरहेका नेपालीहरुको समस्याको सवालमा दूतावासलाई बसेर छलफल गरौँ भन्दा पनि दूतावासले कुनै चासो नलिएको उहाँको गुनासो छ ।
नेपालको सम्मृद्धिमा कोरियाको ज्ञान, सिप र प्रविधि बाँडन एनआरएन कोरिया तयार
Posted By: 24 News Presson: February 09, 2019
लक्ष्मी लामा (गुरूङ)
समाज सेवा गर्न चाहानु र गर्नुमा ठुलो भिन्नता छ । धेरैलाई सामाजिक कार्य गर्ने चाहाना हुन स्वभावीक हो । मान्छे आफैमा सामाजिक प्राणी होे । समाजको अंग भएकै कारण मानिसका हरेक क्रियाकलाप समाज भन्दा अछुतो रहन सक्दैन । समाजबाट टाढा हुन खोजे पनि टाढा हुन सकिदैन । किनकी मानिस समाजकै अभिन्न अंग हो । तर समाज सेवामा होमिनु अथवा सामाजिक क्रियाकलापमा आफुलाई समाहित गराउनु भने आफैमा महान काम हो ।
विश्वमा धेरैले आफ्नो जिवन अरूकै लागी समर्पित गरेका छन् । तर यहाँ भन्न खोजिएको वा बताउन चाहेको सामाजिक कार्य भनेको आफ्नो व्यक्तिगत कामको व्यवस्थापन गरेर समाजको लागि योगदान गर्नु हो । हामीले गर्ने सामाजिक कार्य आफ्नो परिवार वा कामबाट बचेको समय समाजका लागि केहि योगदान गर्नु नै हो । हो ,कहिले काही सामाजिक काम गर्दा आफ्नो परिवार वा व्यवसायमा बाधा पुगेको पनि हुन सक्छ । सामाजिक कार्यको ब्यस्तताले त्यता समय नपुग्नु स्वभाविक हो । तर त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । हामीले सधै उच्च भावना बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । समाजमा निवस्वार्थ ढंगले कुनै लोभ नगरी अगाडि बढ्नु र अरुको लागि योगदान पुरयाउनु चुनौतीपूर्ण पक्कै छ । तर हामी सामाजिक प्राणी भएको कारण त्यस्तो जटिलतालाई चिर्दै अगाडि बढन सक्नुपर्छ । हामीले आफूलाई अरुभन्दा फरक शावित गर्न यस्तै भावनाले ओतपोत हुनैपर्छ ।
समाजमा सामाजिक सेवा देखाउने दाँत नबनेको भने होइन । समाजका शोषीत पीडित जनतालाई चुसेर कमाएको धन सम्पत्तिले धार्मिक मठ मन्दिर,स्तुपा बनाउने र प्रचार गरेर सामाजिक ब्यक्ति भएको शावित गर्ने गलत परिपाटी हावी हुँदै गएको छ । हामीले त्यस्ता देखावटी समाजसेवी प्रवृत्तिलाई अन्त्य भने गनैपर्छ । समाजलाई गलत दिशामा लैजाने र समाजका पीडित जनतालाई माथि उठ्न नदिई उनीहरुकै रगत पसिनामा रमाएर देखावटी समाजसेवा गरि टोपल्ने विकृतिदेखि भने सबै सचेत र सजग हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो । पछिल्लो समय समाजसेवाको खोल ओढेर यस्ता प्रवृत्ति पनि हावी हुँदै गएकोतर्फ सबै सचेत हुनैपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा म पनि सानै उमेर देखि सामाजिक क्षेत्रमा चासो राख्थे । त्यही भएर हुनुपर्छ निवास्र्थ सामाजिक कार्य गर्नमानै बढी आनन्द महसुस गर्ने गरेको छु । मेरो परिवार राजनैतिक पृष्ठभूमिको भएको कारणले पनि हुन सक्छ, सामाजिक क्षेत्रमा सानैदेखि नै रुची र आकर्षण बढ्यो सन् १९९५ मा कोरिया प्रवेश गरेपछि कामको व्यस्तता आदीबाट समय निकालेर आफुले सक्दो सहयोग गरे पनि सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय भएकी थिए । भाषा ,संस्कृती आदीको कारणले कोरियामा निक्कै कठिन भएको क्षणहरू स्मरणमा ताजै छन् । अहिले जस्तो न सामाजिक सञ्जाल थियो न अहिले जस्तो नेपालीको जनघनत्व नै । तर पनि आफुलाई कोरियन संस्कृति र व्यस्त जिवनशैलीसँग घुलमिल गराउनुको बिकल्प थिएन । बिस्तारै बिस्तारै यहाँको जिवनशैलीसँग घुलमिल हुँदै गए । कतिपय अवस्थामा बिभिन्न समस्यामा परेका साथीहरूलाई आफुले सकेको सहयोग गरेपनि सामाजिक क्षेत्रमा भने २००६ देखि एनआरएनको सदस्यतासँगै शुरू भयो ।
मैले सामाजिक गतिविधीमा संलग्न भएको संस्था एनआरएन कोरिया नै हो । यो संस्थामा सदस्य भएदेखि शुरू गरेको समाजिक यात्रा उपाध्यक्ष हुँदै अहिले अध्यक्षको रूपमा नेतृत्व गरिरहँदा पनि जारी राखेको छु । हुन त सामाजिक कार्य गर्नु कहाँ सजिलो छ र ! यहाँ आफुले पनि केहि नगर्ने अरूले गर्न खोजे पनि गर्न नदिनेहरूको बाहुल्य भएको समाजमा सामाजिक काम गर्नू निकै चुनौतीपूर्ण छ । हरेक कार्यमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक सोच र भावना मानीसमा ब्याप्त छ । त्यही कारणले पनि होला समाजमा राम्रो काम गर्दागदै वा भनौ निस्वार्थ रुपमा सामाजिक सेवा गर्दा पनि विभिन्न खालका आलोचनाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिले काँही त नदुखेको टाउको डोरी लगाएर दुखाए जस्तो भान लाग्छ । अझ हामी महिला भएकै कारण पनि कतीपय सामाजिक बन्दनले अप्ठ्यारो पार्छ । रात दिन नभनी हिड्न निक्कै कठिन छ । तर पनि एनआरएन कोरियाका सबै साथीहरू र कोरियावासी नेपालीहरूको सहयोगले हरेक सामाजिक काममा एनआरएन कोरिया सफल बन्दै आइरहेको छ ।
एनआरएन कोरिया यहाँ रहेका ५० हजार भन्दा बढी नेपालीहरूको अभिभावक र साझा संस्था बन्न सफल भएको छ । एनआरएन कोरियाले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै केन्द्र र एसिया प्यासेफिक क्षेत्रीय समितिसँग समन्वय गर्दै आइरहेको छ । त्यही समन्वय भएकै कारण सबै हात एक साथ अभियानमा हामी सफल भएका छौ । हामीले आँटेको र चाहेको काम गर्न सफल बनेका छौ । यसबीचमा सबैको सहयोग मिलेकै कारण एनआरएन कोरियाले धेरै कार्य गर्दै आइरहेको छ । कोरियाले महामहान गौतम बुद्धको जन्म स्थान सम्बन्धी फैलाइएका भ्रमलाई हटाउनेदेखि नेपालमा पर्यटन भित्र्याउने सम्मका महत्वपूर्ण कार्य गदै आएको छ ।
यहाँका नेपालीहरूको हरेक समस्यामा संस्थाले सक्दो सहयोग गर्दै आएको छ । कोरियामा विशेष गरि दुर्घटनामा मृत्यू हुने, सुतेकै ठाउँमा मृत अवस्थामा फेला पर्ने, डिप्रेशन जस्ता समस्या सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । यसलाई एनआरएन कोरियाले सक्दो सहयोग गरेपनि त्यो प्रयाप्त हुन भने सकेको छैन । यसमा सिंगो एनआरएनको ध्यान जान जरूरी देखिन्छ । राज्यले विदेशी कामदारबाट प्राप्त रेमिट्यान्समा मात्र नरमाई वदैशीक रोजगारीमा समस्यामा परेका ब्यक्तीहरुको सेवा सुविधासँगै उनीहरुको हितमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । तर हामी नेपाल सरकारलाई भन्न बाध्य छौ कि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारबाट रेमिट्यान्स भित्राउने कार्य बाहेक खासै प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन् ।
एशिया प्याशेफिक क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुरयाएका छन् । यहाँका नेपालीहरूको आम्दानीको सम्पूर्ण हिंसा स्वदेशमै पुग्ने गर्छ । नेपालीहरुको आम्दानी मध्ये अन्य क्षेत्रको तुलनामा धेरै स्वदेश नै पुग्ने गरेपनि राज्यले यहाँका कामदारको उचित सम्बोधन गर्ने र परेको बेलामा उद्धार समेत गर्न नसकेको देख्दा निकै दुख लाग्छ । अझ कोरियामा त निश्चित समय पछि नेपाल फर्कने नेपालीहरूको धन र सिप सहितको जनशक्तीलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भिर छलफलको आवश्यकता छ ।
एनआरएन कोरिया वा एसिया प्याशिेफिक मात्र नभई सिंंगो एनआरएन यस तर्फ गम्भिर हुनैपर्छ । त्यो सिप र धन सहितको जनशक्तीको परिचालन छिटो भन्दा छिटो गर्नु अहिलेको तड्कारो आवश्यकता छ । ‘नेपालीका लागी नेपाली’भन्ने मुल मर्मलाई अब हामी सबैले व्यवहारमा अक्षरंक्ष लागु गर्नुपर्ने समय आएको छ । भाषणाहरू धेरै भए काम भएन भन्ने आवाजलाई व्यवहारबाट जवाफ दिन ढिला गर्नु हुँदैन् ।
गैर आवासीय नेपाली संघले पहिलो पटक काठमाडौंमा विज्ञ सम्मेलन आयोजना गर्यो । विदेशी पूँजीसँगै ज्ञान, सिप र प्रविधि भित्र्याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको विज्ञ सम्मेलनमा एनआरएन कोरियाबाट पनि विज्ञहरु सहभागि हुनुभयो । सो अवसरमा कोरियाका विज्ञहरुले विज्ञ सम्मेलनमा आफनो कार्यत्रपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । कोरियाबाट नेपालले सिक्न सक्ने र कोरियाबाट फर्केका नेपालीले स्वेदशमा लैजान सक्ने सिप र प्रविधि धेरै छन् । अन्य मुलुकको तुलनामा कोरियामा काम गर्ने नेपालीहरु निश्चित समय काम गरिसकेपछि स्वदेशमै फर्कनुहुन्छ । यहाँ आम्दानी गर्नुभएको अधिकांश आम्दानी स्वदेशमै लग्ने गर्नुभएको छ । अझै कोरियाबाट फर्कनुभएको सयौ नेपालीहरुले स्वदेशमा यहाँ कमाएको पुँजी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहनु भएको प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । नेपालको आर्थिक सम्मृद्धिमा कोरियाको ज्ञान र सिप बाँडने कार्यमा एनआरएन कोरिया हरदम तयार छ । हामी नेपाल सरकार, एनआरएन एसिया प्याशेफिक क्षेत्रीय समिति र केन्द्रसँग जुनसुकै बेला पनि हातेमालो गर्न तयार छौ ।
नेपालमा आर्थिक सम्मृद्धिको कुरा गरिहँदा हामी निकै खुसी हुने गछौ । तर बोली अनुसार काम नहुँदा भने जनतामा निरासा छाउनु स्वभावीक हो । एनआरएन कोरिया नेपालको लागि ज्ञान, सिप र प्रविधि हस्तान्तरणमा गर्नुपर्ने जनुसुकै सहयोग गर्न तयार छ । अहिले नेपालमा महिला हिंसा र बलात्कारले विकराल रुप लिइरहेको छ । बलात्कारका घटना कहालीलाग्दो छ । मुुलुकमा सरकार छ की छैन भन्ने आभास नेपाली छोरी चेलीबेटीले गर्न सकेका छैनन् । दिनदहाडै चेलीबेटी बलात्कारको शिकार हुनुपर्ने अवस्था छ । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याको घटना झनै रहस्यमय बनाइएको छ । जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिन बसेको प्रहरी प्रशासनबाटै बालीकामाथि यस किसिमको घटना घटनु जत्तिको दुर्भाग्य अरु के हुन सक्ला । हरेक दिनजसो सुनीने नाबालीकादेखि बालीकासम्म बलात्कारको शिकारमा पर्नुको पछाडिको कारण के हो ? भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कही कतैबाट बहश चल्न सकेको छैन । हुन त बलात्कारीलाई आजीवन जेलसजाय वा मृत्यदण्ड दिनुपर्ने आवाज नउठेको पनि होइन । तर त्यो आवाजलाई दबाइएको अवस्था छ । एनआरएन कोरियाले महिला हिंसा र बलात्कारको विरुद्ध अभियान पनि चलाएको छ । यस विषयमा ठूलो कुरा यौन सचेतना अहिलेको तड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । विद्यालयको पाठ्यक्रममै यौन शिक्षालाई समावेश गरिनुपर्छ । साथै सामाजिक सचेतना पनि त्यत्तिकै आश्यक छ ।
कोरियामा रहेका नेपालका १५ संघसंस्थाले पाए नयाँ नेतृत्व : एनआरएन र पत्रकार महासंघले दियो बधाई
Posted By: 24 News Presson: February 08, 2019
कोरिया – कोरियामा रहेका नेपालीका विभिन्न सघसंस्थाले कोरियाली नयाँ वर्षको अवसर पारेर अधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरेका छन । कोरियामा रहेका १५ संघसंस्थाले साधारणसभा तथा अधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरेका हुन ।
एनआरएन कोरिया र नेपाल पत्रकार महासंघले नवनिर्वाचीत कार्यसमितिलाई बधाई ज्ञापन गरेको छ । एनआरएन कोरिया अध्यक्ष लक्ष्मी गुरुग र सचिव केशव थापाले एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै बधाई ज्ञापन गर्नुभएको हो ।
त्यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघ दक्षीण कोरिया शाखा अध्यक्ष रन्जन राज कुवँरले पनि एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न संघसंस्थाका नवनिर्वाचीत कार्यसमितिमा बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ ।